यो घरमा जब म नयाँ दुलही भएर भित्रिए । त्यही दिनदेखि देउरानी र मेरोबीच बोलचाल बन्द भो । त्यो घरमा दुई दाजुभाई । मेरा श्रीमान जेठा । भाईले पहिला बिहे गरे। बिहे गरेको दुई वर्षसम्म हाम्रा देवर बाबुको सन्तान भएको थिएन। किन सन्तान भएनन् त्यो मेरो चासोको विषय बनेको थियो। यो चासो हाम्रा सासू ससुरालाई पनि थियो । खासै भन्ने हो भने हाम्रा देवरलाई बच्चा नभएकोमा कुनै ग्लानी देखेकी थिइन मैले ।
हामी दुवै देउरानी जेठानी एकै गाउँका । एकै स्कुलमा पढेका । बच्चामासँगै बाख्रा गोठालो गाको। अलिक हुर्कँदै गएपछि मेलापात भारो पर्म सँगै हिँड्ने गरेको । उनी बच्चादेखि अलि नक्कली थिइन । १३, १४ वर्षको उमेरमै लिपिस्टिक लगाउँथिन। आठ नौ कक्षा पढ्दा नै लभ लेटरको ओइरो लाग्थ्यो । मलाई देखाउँथिन । राम्री पनि थिइन बिछट्टकी । दस वर्षको उमेरमा नछुने भाकिन ।
अलिक चन्चले महिलाको छुइ पनि चाँडाे हुन्छकी क्या हो ।
हाम्रा देवर र मेरा श्रीमान पनि त्यही महेन्द्र माविमा पढेका । मेरा देवर पढ्न अलिक कम्जोर । देउरानी बिजुली थिइन् । सेन्ट अप परीक्षा सकिनुअघि देवरले पनि प्रेम प्रस्ताव राखेछन् । एकान दुइकान मैदान भो । हेड सरले पनि थाहा पाए। देउरानी उत्ताउली सबैलाई थाहा छ । देउरानीले मेरा श्रीमानलाई मन पराउँदिरहिछिन् । फेरि मेरा श्रीमानचैँ मलाई मन पराउँने रछन । पुष्पाको प्रेमलाई उहाँले इन्कार गर्नुभएको रहेछ ।
एकदिन एकान्तमा भेटेर पुष्पालाई सम्झाउनु भएछ ।
'तिमीलाई मेरो भाई केशवले मन पराउँछ उसैसँग बिहे गर'
'म त हजूरलाई पो मन पराउँछु कसरी भाईसँग बिहे गरुँ ' परिस्थितिले भाइसँग बिहे हुन पुग्यो । बिहेमा हाम्री देउरानीले मेरा श्रीमानलाई भनेकी थिइनरे-
'आखिर जुन घरमा तपाईं हुनुहुन्छ म त्यही घरमा भित्रिदैछु । मैले मन पराको पुरुष म सँगै मेरै आँखा वरिपरि नै त हुन्छन देखुला म पनि ... ।'
दाइको बिहे नगरी भाईको बिहे गर्नुहुन्न भन्ने सामाजिक प्रचलन समेतको बेवास्ता गरि हाम्रा देवर राजाले देउरानीलाई बाजा बजाए । पुष्पाले मेरा श्रीमानलाई मन पराउँछिन भन्ने कुरो अरु कसैलाई पनि थाहा छैन । हाम्रा देवर राजाको एकोहोरो पिरती र पुष्पाको उत्तालो पनले ती सबै परिस्थिति निम्तिएको थियो ।
सत्य कुरो भन्नुपर्दा मैले चै मेरा देवर राजालाई मन पराउँथे ।
मनको कुरा भन्न मात्रै पो नसकेको हो । मैले मेरा देवर राजालाई पाउने जुक्ति गर्दा मेरी देउरानीले भाजो हालेकी थिइन। आखिर न मैले चाहेको पुरुष सग मेरो बिहे भयो न उनले चाहेको पुरुषसँग उनकाे बिहे भयो ।
आज बिहे गरेको पनि तीन महिना बित्यो ।
हामीले माया गरेका दुवै पुरुष एकै घरमा छन् । हामी दुई नारी संयोगबश एकै घरमा परेका छौँ । म मेरी देउरानीको लोग्नेलाई मन पराउँछु । उनी मेरो लोग्नेलाई मन पराउँछिन । म मेरा देवर देखेर मक्ख छु । देउरानी मेरा श्रीमान देखेर मक्ख छिन । हामी सबै एकाघरमै छौ तर त्याहा आत्मीयताको बसन्त फुल्न सकेको छैन ।
प्रेम शरीरसँग हुन्छ कि आत्मासँग ?
यो प्रश्न सुर्यास्तसँगै अस्ताउँथ्यो र सुर्योदयसँगै झुल्कन्थ्यो । सुर्य मलीन भएर अस्ताए पनि उदाउँदा उसकाे तेज निर्विकल्प सत्य भएर फूलका बोटहरुलाई तातो किरणले माया गर्छ ।
माया न्यानो स्वेच्छाचारको आमन्त्रण हो। काँडाले घोचेका फूलहरु मात्रै सुरक्षित बाँच्नसक्छन बोटमा । शरीर भोग्नु एउटा कुरा प्रेममा रहनु अर्को कुरा । तर दुवैको सहमिलन उत्तम हो । हामीमा यो कुराको अभाव बाँचिरह्यो । जिन्दगीमा चाहेका कतिपय कुराहरू पुर्ण हुँदैनन् । तर मान्छे कहिले अपुरो बाँच्दैन।
देउरानीको ब्यवहारमा परिवर्तन आयो । बचपन देखिको साथी थिइ उ तर बोल्दिन । मैले उसकाे प्रेम खोसे । कसैको प्रेम खोसिदिनु पनि पाप थियो होला । यसो त उसले पनि मेरो प्रेम खोसेकी थिइ । मैले त्यो बेला अभिब्यक्त गर्न सकेकी थिइन । त्यो चै मेरो गल्ती थियो । त्यो कुरा मैले स्वीकार गर्नैपर्छ । उ मेरो लोग्ने लाई चाहन्थी । म उस्को लोग्नेलाई चाहन्थे । चाँहदामा के हुँदोरहेछ र आखिर !
प्रेमको मुहान कहाँ थुनिएको छ । बहाव मात्रै त फरक हो नि !
रातभर हाम्रा देवर राजा र देउरानी सुतेको कोठा बाहिर ढोकामा कान थापेर सुन्थे मेरा श्रीमान निदाएको बेला ।
के कुरा गर्छन होला । बिहे गरेको यतिका वर्ष भयो हाम्रा देवर राजाले के साच्चै आफुले माया गरेकी केटी पाउँदा आफ्नो प्रेमको सदुपयोग गरेका छन त ? कस्तो अचम्मको छ यो दुनियाँ ? चाहेको पुग्दैन र पनि मान्छे त्यही चाहना पुर्तीको बाटोमा हिँडिरहन सक्छ । म त्यस्तै भए आज ।
मानिस सपनाको छाँया वरिपरि घुमिरहन्छन् । सपना आशा हो । मानिस आफैँ त्यागिन्छ तर आशाबाट बन्चित हुन सक्तैन ।
एकै ओछ्यान एकै अँगालोमा जवरजस्ती बेरिएर सुतेपनि मनले बेरिन सकेन भने मायाले बेरिन सकेन भने त्यहाँ प्राप्तिको बाटो अन्त हुन्छ र मानिस आफु हिँड्ने बाटो मोड्न खोज्छ ।
म देवरलाई मन पराउँने । देउरानी मेरा लोग्नेलाई मन पराउने । मेरा देवर मलाई होइन आफ्नै श्रीमतीलाई मन पराउने ।
एउटाले मात्रै एकोहोरो मन पराउनु अन्तत पराजित हुनु हो ।
यहाँ अपराजिताहरु ज्यादै कम छन । एकदिन मैले मेरा श्रीमान लाई भने -
'हाम्रा केशव बाबु दुखी देखिनु हुन्छ किन होला ?'
'उसले मन पराकोले उसलाई मन पराइनन समस्या यति हो '
'समस्या यो भन्दा अरु गम्भीर के हुन सक्छर ?'
'जिन्दगी बिताउनुत हो बितिहाल्छ नि ?'
'केवल बिताउने नाउँमा आफ्नो आत्मालाइ किन बलि दिनु ?'
'एउटा कुरा भनी भने म महिला भन्नू होला ?'
'भनन् महिला पुरुष भन्दा पनि समस्या पो ठुलो रह्यो '
'हाम्री देउरानीले हजूरलाई मन पराउँछिन् ?'
'कसरी ! यो त पाप हो । म जेठाजु हुँ उसकाे !'
'जेठाजु हुनुभन्दा पहिल्यै मन पराउँथिन उसले हजूरलाई '
त्यो दिन मैले भेद खोलिदिए । मनमा लागेको भने । भन्नू थियो । उहाँले सुन्नु भो । मैले नभने पनि घरकाले थाहा पाउँथे कुनैदिन । मलाई पनि हलुको भो । एउटा भारी बिसाए । देउरानी नबोल्ने मसग । तर एकदिन आफैँ बोले । बोलेर आयु घट्दैन । बुहारी जेठाजु भन्दा भुतुक्कै ।' तिम्ले सानैमा मन पराको मान्छेले मलाई त्यति वास्ता गर्दैनन् आजकल' कुरा सुनेर पुस्पा खुशी भइन् । अरुको दु:खमा मानिस आफू सुखको अनुभुति गर्छ किनकि त्यस्तै दु:ख उसले भोग गरिरहँदा म जस्तै दु:खी अरु पनि रेछन भनेर ऊ खुशी हुन्छ रे ! मानिस दुखी यो मानेमा छन कि अरु खुशी छन र मानिस खुशी यो मानेमा छन् कि अरु दु:खी छन् ।
स्त्रीले चाहिन भने घर सप्रन्छ । चाहिनन् भने घर बिग्रन्छ । कसैको आवाद घर स्त्री कै कारणले उजाड बन्छ कसैको उजाड घर स्त्रीकै कारणले आवाद बन्छ । देउरानी अब म सँग बोल्ने भइन । हामी मिल्न थाल्यौँ । म उनको जेठाजुसँग खुशी हुन नसकेको कुरा खुलेर कुरा गर्न थाले । सिङ्गो जिन्दगी बिताउनु त छ्दैछ तर यसरी यो ढंगले जीवन नौका कसरी अगाडि जाने होलार! दबिएको त्यो अमित वासना किनार हुन खोज्दैथ्यो ।
ढोका थुनेर घन्टाैसम्म म देवर राजाको कल्पना गरि बस्थे । देख्छु उहाँले खाएको लाएको हिँडेको बोलेको । अति मीठो लाग्थ्यो । घोप्टाे परेको जुँघा चौडा छाति बलिष्ठ हात । मैले कल्पेकी एउटा पुरुष हुन मेरा देवर । तर देउरानी उनै देवरलाइ मन पराउँदिन । पुरुष मन पग्लिन्छ छिटो । स्त्री हिमालको बरफ हुन । धेरै तातो किरण चाहिन्छ जमेको हिउँ पग्लिन ।
मन परेको पुरुष अगाडि उभिदिए मात्रै पनि कस्तो खुशीको मादकता चढछ स्त्री मनमा ।
एकदिन एकान्तमा मैले देवरको हात समातिदिए ।
मैतिर नजर बिस्फारित गर्दै मुसुक्क हासेर उनी कलेज गए । पहिलो चोटि देखे देवर राजाले यति मीठो मायालु हाँसोले मलाई तृप्त पारेका । नत्र उनी ज्यादै कम हाँस्ने पुरुष हुन ।
म भाउजू हुँ । तर पुरानी प्रेमीका पनि त हुँ नि । उनले पो मेरी देउरानीलाई मन पराएका थिए तर मैले त उहाँलाई मन पराएकी थिए नी । भन्न पो सकिनत । भनेकी भए पनि के गर्नुर मेरा देवर एकोहोरो भाका थिए पुष्पाको प्रेममा । तर पुस्पाको मनमा अर्कै पुरुष थियो मेरा लोग्ने ।
हरेक पुरुष अहममा बाँचिरहन्छ र स्त्रीलाई आफू अनुरूपको बाँच्न र हाँस्न सिकाउँछ । सबै स्त्री सबै पुरुषको इच्छा र इशारामा बाँच्न सक्तैनन् र चाँहदैनन् पनि । सम्झौता नै गरेर बाँचेको जिन्दगी त्यो आधा जिन्दगी मात्रै हो । स्त्रीको आधा खुसीमा पुरुषको आधा खुशी थपिए मात्रै पो त्यो पुर्ण हुन्थ्यो होला ।
'दिदी मलाई मेरो प्रेम फिर्ता गर्नु सक्नु हुन्छ ?'
'बुझिन पुष्पा के भन्न खोजेकी ?'
'तपाईको लोग्ने मलाई दिनुस् म तपाईंलाई मेरो लोग्ने '
'के यो सहज होला र ?'
'सहज बनाउने अरुले होइन हामीले त हो नि दिदी '
'लोक- लाज सासुससुरा समाज नि ?'
'मलाई थाहा छ तपाईं केशवलाई कति धेरै माया गर्नुहुन्छ ।'
हामीसँगै स्कुल पढ्दा तपाईले लुकाएर केशवलाई चकलेट दिनुहुन्थ्यो । तपाईंको मात्रै एकोहोरो चकलेटि माया थियो त्यो । केशव तपाईलाई होइन मलाई मात्रै माया गर्थ्यो । म किरण हजुरको लोग्नेलाई माया गर्थे । यी दुई दाजुभाइले हामी दुवैको प्रेमलाइ बुझेनन् है दिदी । अब गर्नुहोस् दिदी केशवलाई धित पुर्याएर माया गर्नुस् तर मलाई मेरो किरण दिनुस् । बिन्ती म किरणसँग मात्रै खुसी रहन सक्छु ।
'पुष्पा चकलेटि माया के माया जो खाउन्जेल मात्रै मीठो निले
'पछि स्वाद्ले भुलेर जान्छ तर स्वाद लिनेले चै भुल्दैन '
'चिन्ता नगर्नुस् केशवलाई मैले बृतान्त सुनाइसकेकी छु '
'उनी त मेरा देवर हुन अब सामाजिक बन्धन पनित छ नि '
'देवर त हो नि छोरा त होइननी '
पुष्पा उ आफ्नो प्रेम प्राप्तिका लागि जे गर्न पनि तयार छे ।
म भित्र दमित त्यो माया फेरि फक्रन खोज्यो । किरणको प्रतिबिम्बित हो केशव जसलाई मैले मेरो आत्माले चाहेको थिए । जब म यहाँ किरणसँग बिहे गरेर आए त्यो केवल केशव प्राप्तिको एउटा महत्त्वपूर्ण बाटो थियो । प्रेममा बहस हुँदैन । प्रेममा वक्तृत्व पनि हुँदैन । प्रेममा केवल मौनता हुन्छ ।
मौनता प्रेमको नदी हो । चुपचापमा नै फक्र्यौं हामी र मैले कहिले ब्यक्त गर्न सकिन केशव प्रतिको मेरो आत्मिक प्रेम किनकि उ पुष्पालाई माया गर्थ्यो । मैले खोसिन उस्को खुशी मुटुलाई । कहिले पनि । दैहिक प्रेम थियो भने शरीर भोग पछि तिर्खा मेटिन्थ्यो र आफै किनार लाग्थ्यो प्रेम । तर यो आत्मिक प्रेम थियो जो मुटुको छाँयामा टुसा उम्रेको छ ।
केशव पुष्पालाई (आफ्नै श्रीमतीलाई) एकोहोरो माया गर्छ । तर पुष्पालाई किरणलाई (जेठाजु) लाई एकोहोरो माया गर्छे। म केशव अर्थात मेरो देवरलाई माया गर्छु ।यो कथाका हामी तीन पात्र मनोद्वन्दमा फसेका छौँ । यस्को समाधान के हुन सक्ला!
खोइ के हो म बहुलाउन थाले जस्तो लाग्यो । किरण निदाएपछी म देवर देउरानी सुतेको कोठा बाहिर ढोकामा कान थापेर बसिरहन्छु आजकल ।
निन्द्रा नलागेर आखाको भृकुटीनै कालो कालो भएको छ । उनीहरूले स्वास फेरेको सुनिरहन्छु । कल्पना गर्छु मेरो देवर (मेरो प्रेमी) ले कसरी भोग्छन होला पुस्पालाइ । मेरो दमित यौन भाव त्यो ढोकामा पुगेपछि उभारिन्छ । र त्याहा उभिएर कान थापेपछी तिनीहरूको मन्द श्वास सुन्छु । म एकाएक उत्तेजित हुन्छु । अनि शिथिल हुन्छु ।
एउटा अचम्मको रोग लागेको छ मलाई ।
महिलालाई लाग्ने हिस्टेरिया भएको छ मलाई ।
निन्द्रा नआएको धेरै रात भो ।एक प्रकारको बिमारी भए म । निन्द्रा लाग्ने गोलिले पनि काम गर्न छोडे छ अबत। एक दिनत डबल डाेज परेछ । किरणले हात जोडी बिन्ती गरे डबल डाेज स्लिपिङ टयाबलेट नखाउ भनेर । म भित्र उकुसमुकुस छ ।
बेचैनी छ । पुरुष भन्दा महिला शान्त र सितल हुनुपर्ने हो तर म हुन सकिन । म भित्र एउटा अभाव बाँचिरहेको छ अतित देखि। मैले केशवलाई चाहे तर पाइन । नपाएको कुरा नै किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ यो सन्सारमा ह ? हरेक रात देवोर देउरानी सुतेको ढोकाको काप बाट तिनलाई चिहाएर हेरेपछि मात्रै म मानसिक र शारीरिक तृप्ती पाउँथे । यो क्रम धेरै दिन रह्यो ।
असन्तुष्ट देउरानीले एक्दिन साँचो कुरा खोलीन-
'दिदी मरिजाम हामी सँगै सुत्दैनौ '
'एकै ओछ्यान अनि त्यसो भन्ने बच्चा जस्तो कुरा नगरन '
'ओछ्यान एक भएर के भो मन दुई भएपछि ?'
पुष्पाको कुरा सहि लाग्यो । ओछ्यान एकै भएर के काम ? सिरानी पनि एक भएर के काम ? जब सपना फरक फरक छन भने, उदेश्य फरक छ भने, मन भिन्न छ भने । अनि मैले केशवलाई माया गर्नु पनि त्यहित होला नि ।
एकै ओछ्यानमा जव फरक मन निदाउछ त्याहा अपनत्वको अभावमा न्यानोपन पनि रहदैन । सिरक एकै ओढ्नु प्रेमको न्यानो ताप्नु पनि होइन नि । माया ओछ्यानुपर्छ माया नै सिरानी हुनुपर्छ र मायानै सिरक हुनुपर्छ अनि सपना पनि एकै देखिन्छ । त्यो बिनाको माया माया होइन त्यो त केवल बासना हो । लोग्नेको स्वाद के सहवास मात्रै होत ? लोग्ने हुनु आइमाई सुरक्षित हुन मात्रै होत ? स्वास्नी हुनुलाई उ पुरुषको अकोपाइड मात्रै होत? यो त महिला कोटामा परी लोकसेवा परिक्षा पास गरेजस्तो भएन र ?
म किन यतिबिघ्न केवश भन्दा भुतुक्क भाको? उ पुस्पालाइ पो माया गर्छ मलाई त गर्दैन नि । अनि ? अनि किन म उ भन्दा भुतुक्क हुनु? के छ त त्यस्तो उसमा जुन चिज किरणसँग छैन।
देउरानी खुशी छैन । म पनि किरण सग खुशी छैन । हामी दुवै जोइपोइ भित्र एउटा असन्तुष्टिले बास गरेको धेरै भो । उहाँहरु दाजुभाइ हुन । तर त्यति खुलेर पनि बोल्दैनन । किरणको ब्यापार छ उसलाई प्रेम स्रेम स्वास्नी यौवन यौन चासो छैन ।
उ केवल मेरो ओछ्यानमा साथी बनिदिन्छ बस । सुतिदिन्छ ।
निदाउँछ मस्तले । घुर्छ । मलाई घुर्ने बानी भाको मान्छे बिल्कुल मन पर्दैन । किरण चुरोट पिउँछ । पिउनत केशव अर्थात मेरो देवर राजा पनि पिउछन तर खोइ स्वास गन्हाए जस्तो लाग्दैन।
मन परेको मान्छेले जे गरे पनि सुहाउने है। हिजो भात पस्किदा देवर राजाले भन्नू भो -'भाउजू कति मीठो तरकारी ।' कस्तो पुलकित भए म । बोली नै मीठो मेरा देवरको । ओठ नै स्वादिलो । महिला लाइ यदि जे गर्न पनि छुट भाको भए म देवर राजाको गालामा म्वाइ खाइदिन्थे । आइमाईलाई किन बलात्कार गर्ने छुट छैन ह? नत्र मैले जानेथे मेरा राजाबाबुलाइ !
आज स्लिपिङ टयाबलेटको डाेज कम भएछ । बिचरी म ।किरण निदाएछ । फेरि उही देवर सुतेको ढोकाबाट कान थाप्न थाले ।
आज देवर देवरानी झगडा गरेको सुने । देवराजले एक थप्पड हाने देउरानीको गालामा । उ रुन थाली । त्यो क्षण मलाई आनन्द लाग्यो । म चाहन्छु यी दुइको झगडा होस । केशव म तिर फर्कियोस । केशव र पुस्पा बिच यौन सम्बन्ध पनि नहोस। केसव चोखो रहोस । कुनै दिन आउला उस्को सबै कुमार बैँस म भित्र पोखोस । म भिजु निथ्रुक्क । मलाई हलहली पसिना आवोस । म आनन्दले मुर्छा परु। म भित्रको दमित वासना केशवको शरीरलाई भोग चढाउ । कति आनन्द होला त्यो बेला । उस्को छाँयाले मलाई निलोस । खप्पै खावोस मलाई त्यो अगालोले । म हलुका हुन्थे हुला । किन केशव सोच्दैमा मलाई उत्तेजना हुन्छ । केशव आगोको अगुल्टो हो जस्लाइ म आफ्नो शरीरमा झोस्न चाहन्छु । के हिस्टेरिया यहि हो ? । दमित वासना ? । ममा अलिकति पागलपनको सिम्टम आइसकेको छ ।
झगडा सुनेपछि ढोकाबाट फर्किए । आनन्द आयो । किरण घुरिरहेकै थियोे । म नहुदा चुरोट पिएछ । मुखबाट एउटा नमीठो दुर्घन्ध फैलिरहेको थियोे । एउटा भिन्दै सिरक लिएर त्यो रात म भैमा सुते । त्यो घर कति उदार छ म अचम्मित हुन्छु । त्याहाको स्वन्त्रता साच्चिकै अनमोल छ । ससुराले कहिले गाली गर्दैनन् ।
सासू यो उमेरमा पनि हासखेल रमाइलो गर्छिन ।
एक्दिन सासुले मलाई एक्लै बोलाएर भनिन-
'ठुल दुलही तिमी मेरो कान्छो केसुलाई मन पराउँछ्यौ हो ?'
' हो ,तर हजूरलाइ कसरी ? म उहाँलाई सानैदेखी मन पराउँथे'
' मैले तिमी राती राती केसुको ढोकाबाट फर्केको देख्थे '
'तर त्यस्तो केही होइन आमा म उनीहरू झगडा गरेकी भनेर
बेलुकी चिहाउँथे ।'
केसुले गल्ती गर्यो ठुल दुलै पुस्पाले किरणलाई पो मन
पराउँदिरैछन । हामी सोच्दै छौ के गर्नी भनेर । तिम्रा ससुरालाई यो सबै घटना थाहा छ । हाम्रो घरको समस्या हामीनै
मिलाउनुपर्छ ठुल दुलै ।'
सासुबुहारीको गन्थन लामो भो । त्यो रात मलाई खोइ किन पो हो स्लिपिङ टयाबलेट नखाई निन्द्रा पर्यो । ओखतीले निन्द्रा ल्याउने होइन रहेछ । निन्द्रा ल्याउने चिजत मनको खुशी पो रहेछ । मन नै हो रेछ सबैभन्दा ठुलो शत्रु पनि सबैभन्दा ठुलो मित्र पनि । कसरी देवर सग बिहे गर्नु के भनेकी होलिन हाम्री सासू आमोइले । किरण मस्त निन्द्रामा थियो । पहिले जस्तो म पुन देवर राजाको ढोकाबाट चिहाउन गइन। मन सम्हालिन थाल्यो । किरण जस्ले मलाई बिहे गरेर ल्यायो उसलाई म किन यति विघ्न घृणा गरु । उस्को गल्ती के छ र? मेरो पुस्पाको र केशवको गल्तीले किन किरणलाई पल पल मारु । उ पनि त पुरुष हो ।
पुस्पाको असन्तुष्टि उस्तै थियो । एक्दिन ससुराले हामी चरैजनालाइ आफ्नो कोठामै बोलाउनु भो । थालमा माला अवीर थिए । कुनै मन्दिर बाट आएका होलान प्रसाद दिन बोलाका होलान् भन्ठाने । सासू ससुरा म देवर राजा र किरण सगै थियौ । ससुराले देवरराजाको मुखमा हेर्दै भने-
'केसु पुष्पालाई तिमीले मन परायौ बिहे गर्यौ तर पुष्पा तिम्रो
कहिले पनि हुन सकिनन । पुस्पा किरणलाई मन पराउछिन
यो कुरो तलाइ पनि था थ्यो । अनि तेरि भाउजू किरणलाई
होइन केशवलाई मन पराउँछे । यहाँ पुरुषले मन पराउनुको
कुनै अर्थ रहन्न । नारीले मन पराइदिइन भने मात्रै पुरुषको घर पक्काको हुनेरहेछ ।
त्यसैले मैले यी बुहारीहरुको प्रेमलाइ सम्मान गर्दै पुस्पलाइ किरण र केशवलाई ठुल दुलहीसँग बिहे गराउदैछौ । ल माला पहिराउ बुहारी हो आफुले मन पराको पुरुषलाई '
सासू ससुराको साक्ष्यात मन्जुरीमा हाम्रो दोस्रो बिहे भो । मैले सोचे दमित वासना होइनरहेछ दमित प्रेम पो रहेछ जिन्दगी त !
नेपालमा आएको खोपबारे जान्नै पर्ने तथ्यहरू : डा. पाण्डे विचार/अन्तरवार्ता |